मोहनविक्रम सिंह | चैत ४, २०७६ मंगलबार | 0
अहिले विश्वव्यापीरूपमा नै कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको आतंक फैलिएको छ । त्यसको अहिलेसम्म कुनै औषधि पनि फेला परेको छैन । त्यसले गर्दा त्यसको खतराको गम्भीरता अरू बढेर गएको छ । तर त्यो खतराबाट तर्सनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । किनभने त्यो खतरालाई विश्वव्यापी प्रकारका खतराहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने त्यो सामान्य र गौण महत्वको कुरा बन्न जान्छ ।
कुनै रोगबाट बच्नको लागि हामीहरूले सधैँ कोसिस गरिरहनु पर्दछ । त्यही कुरा कोराना भाइरसको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । हामीले मृत्युबाट बच्नको लागि सधैँ कोसिस गर्नुपर्छ,, यो जान्दाजान्दै पनि कि अन्तमा त्यो हाम्रो जीवनमा अनिवार्य छ । यस प्रकारको मानसिकता वा आत्मबलबाट नै हामीले कोरोना भाइरसमात्र होइन, सबै प्रकारका रोग, मृत्यु वा महामारीको पनि आतङ्कबाट माथि उठ्न सक्छौँ र उठ्नु पनि पर्दछ । यस प्रकारको मानसिकता वा आत्मबल नै कोरोना भाइरस वा मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा अचुक औषधि वा अजय हतियार पनि हो ।
कोरोना भाइरस चीनबाट सुरु भयो र त्यहाँ त्यसबाट करिब चार हजार मानिसहरूको मृत्यु भयो र त्यो कारणले विश्वव्यापी आतङ्क फैलियो । तर त्यो संख्या कुनै ठूलो संख्या होइन । चीनमा विभिन्न रोग, प्राकृतिक दुर्घटना आदि कारणबाट लाखौँ मानिसहरूको मृत्यु हुँदै आएको छ । तर त्यो कारणले विश्वमा कुनै आतङ्क फिलिदैनन । त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, कोरोना भाइरसका कारणले मृत्यु भएका मानिसहरूको संख्याभन्दा त्यो कारणले मनोवैज्ञानिक रूपले मानिसहरूमा पैदा भएको भयका कारणले नै बढी आतङ्क फैलिएको हो ।
चीनमा बेग्लाबैग्लै समयमा विभिन्न प्राकृतिक दुर्घटना वा रोगहरूका कारणले अहिले कोरोना भाइरसको कारणले भन्दा कैयौँ गुणा मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । चीनमा सन् १९०७ देखि १९११ को अनिकालमा २ करोड ५० लाख, सन् १९२० को भूकम्पका कारण २ लाख ७३ हजार ४ सय, सन् १९३५ मा बाढीका कारण १ लाख ४५ हजार, सन् २००८ मा भूकम्पका कारण ८७ हजार ५ सय ८७, १९५८–१९६३ को अनिकालमा ४३ लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो । तिनीहरूको तुलनामा अहिले कोरोना भाइरसद्वारा मृत्यु भएको करिब ४ हजार संख्या एकदम सामान्य र नगण्य हो ।
संसारका अन्य भागहरूमा पनि विभिन्न प्राकृतिक दुर्घटना, रोगव्याधी वा महामारीका कारणले ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । सन् १९१० को भूकम्पका कारण हैटीमा ३ लाख १६ हजार, सन् २००५ मा भूकम्पका कारण भारत र पाकिस्तानमा गरी ८७ हजार, सन् २००८ को सुनामीका कारण म्यानमारमा १ लाख ३८ हजार, इटालीमा १९०८ मा भूकम्पकै कारण १ लाख २३ हजार, १७६९ देखि १७७३ सम्म भारतमा अनिकालद्वारा १० लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो ।
लुका कारणले अमेरिकामा १९०१ मा ९ हजार ५ सय र रूसमा २०१० मा ५६ हजार मानिसहरू मरेका थिए । सन् १८१७ देखि १८२३ को बीचमा हैजाद्वारा वार्षिक २१ हजारदेखि १ लाख ४३ हजार जना, सन् १९९८ देखि १९९९ सम्म एक वर्षसम्म चलेको स्पेनिस फ्लुका कारण विश्वमा ५ करोड, सन् १९८१ देखि हालसम्म एचआइभी एड्सका कारण ३ करोड २० लाख, सन् १९०० देखि १९८० का बीचमा विफरद्वारा ३० करोड, सन् १३३२ देखि १८२० का बीचमा कालो मृत्युद्वारा १० करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
माथिको संक्षिप्त विवरणबाट थाहा हुन्छ विभिन्नरूपमा मृत्युले संसारमा सधैँ आक्रमण गर्दै आएको छ । अहिले कोरोना भाइरसको कारणले संसारमा मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या करिब ७ हजार पुगेको बताइन्छ । त्यो संख्याभन्दा त्यसको भयानकता यो कुरामा छ कि त्यो तीव्रगतिले विश्वमा फैलिरहेको छ र त्यसरी आउने दिनहरूमा त्यो संख्या कैयौँ गुणा बढी पनि हुन सक्दछ । तर संसारमा अहिलेसम्म विभिन्न प्राकृतिक घटना वा रोगब्याधीका कारणले मानिसहरूको जुन ठूलो पैमानामा मृत्यु हुने गरेको छ, त्यसको तुलनामा कोरोना भाइरसको कारणले भएको मृत्यु वा आउने दिनहरूमा त्यो कारणले हुने मृत्युको संख्या सामान्य हो ।
कोरोना भाइरस सर्वप्रथम चीनबाट सुरु भयो । तर अब त्यहाँ त्यसमाथि नियन्त्रण हुँदै गइरहेको छ । वैज्ञानिकहरूले त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि औषधिको आविष्कार गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । हामीले आशा गर्न सक्दछौँ कि आउने दिनहरूमा छिटै त्यसमाथि नियन्त्रण हुनेछ । त्यसैले त्यो रोगबाट धेरै नै भयभीत हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । तैपनि जुनबेला कुनै रोग देखापर्दछ वा परिवारमा एकजना पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, त्यो धेरै नै दुःख र पीडाको विषय हुन्छ । त्यसैले अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस जसरी सङ्क्रमण हुँदै गइरहेको छ,, कैयौँ देशहरूमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन र त्यसमाथि नियन्त्रणको लागि पूरा प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कसैको व्यक्तिगत दुःख होस्, प्राकृतिक वा कुनै रोगका कारणले पैदा हुने गम्भीर स्थिति होस् वा कोरोना भाइरस जस्ता रोगहरूका कारणले विश्वव्यापीरूपमा फैलने आतङ्कको कुरा होस्, तत्कालका लागि तिनीहरू जतिसुकै गम्भीर र भयानक भए पनि समय बित्नुका साथै स्थिति सामान्य हुँदै जान्छ र जीवन पुनः स्वाभाविक प्रकारले अगाडि बढ्न थाल्दछ । घरमा कुनै प्रियजनको मृत्युले कसैलाई कति धेरै दुःख र पीडा पुग्दछ त्यो थाहा भएको कुरा हो । तर समय बित्नुका साथै मानिसहरूले त्यो दुःख र पीडा भुल्दछन् र उनीहरू फेरि हाँसेर बाच्न थाल्दछन् । संसारका ठूलाठूला दुर्घटनाहरू वा रोगहरूका कारणले लाखौँ करोडौँ मान्छे मरे पनि त्यसले दिएको दुःख र पीडा सधैँ रहन्न ।
खाली ठूलठूला दुर्घटना वा ठूलठूला रोगव्याधीहरूका कारणले मात्र होइन, सामान्य रूपमा पनि दिनदिनै लाखौँ मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । विभिन्न रोग, दुर्घटना आदिका कारणले मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्दछ । रुघा, खोकी, इन्फ्लुएन्जा, ज्वरो, टिबी आदि विभिन्न कारणले दिनदिनै ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । त्यसरी यो भन्न सकिन्छ– मृत्यु एउटा प्राकृतिक, स्वाभाविक र अनिवार्य कुरा हो र संसारमा कोही पनि त्यसबाट बच्न सक्दैन । स्वयं मानिसहरूको पारस्परिक व्यवहारका कारणले पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्दछ । दिनदिनै मानिसहरूले विभिन्न कारणले मानिसहरूको हत्या गरिरहेका समाचारहरू आइरहन्छन् । युद्धहरूद्वारा पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धहरूमा करोडौँ मानिसहरूको मृत्यु भयो । ती युद्धहरू बाहेक मानवजातिको इतिहासमा अरू पनि हजारौँ युद्धहरू हुने गरेका असंख्य उदाहरणहरू छन् । हामीले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रामक रूप र त्यसबाट हुने गरेका मृत्युहरूलाई पनि त्यही प्रकारको विश्वव्यापी र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । चीजलाई त्यसरी हेरेपछि त्यसबाट हामीमा पैदा हुने भय र आतङ्कको भावना एकदम समाप्त हुनेछ र हामीले त्यसलाई दृढतापूर्वक र स्थिर भएर सामना गर्न सक्ने छौँ । नत्र भने कोरोना भाइरसले हामीलाई मार्नुभन्दा पहिले त्यस प्रकारको भयले नै हामीलाई मारिसक्ने छ ।
कुनै पनि कठिनभन्दा कठिन वा ठूलोभन्दा ठूलो दुःख वा खतरालाई हामीले वर्तमान सन्दर्भमा मात्र हेर्ने प्रयत्न गर्यौँ भने त्यसले हामीलाई वास्तविक रूपमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी दुःखित वा आतङ्कित बनाउँछ । हामीले त्यस प्रकारको कुनै दुःख वा खतरालाई एकातिर अतीत र अर्कातिर भविष्यको सन्दर्भमा हेर्ने र बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसको अर्थ यो हो, कुनै दुःख वा विपत पर्यो भने हामीले के सोच्नु पर्छ भने, मानिसहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा र वर्तमान समयमा जे जति दुःख र आपतहरू पर्दछन, सामाजिक, ऐतिहासिक र विश्वव्यापीरूपमा पनि मानिसहरूलाई त्योभन्दा कैयौँ ठूलठूला आपत वा विपत परेका थिए भन्ने कुरा थाहा भएपछि तात्कालिकरूपमा व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, कोरोना भाइरस जस्ता ठूलठूला महामारी पनि हाम्रा लागि सामान्य र हलुका हुन जान्छन् ।
नेपालकै कुरा गरौँ । हाम्रो देशमा कुन बेला कुन प्रकारका प्राकृतिक दुर्घटना वा रोगव्याधीका कारणले कति मानिस मरेका थिए भन्ने तथ्याङ्कहरू हामीहरूसित अत्यन्तै कम मात्रामा उपलब्ध छन् । तैपनि विभिन्न प्राकृतिक घटना, भूकम्प, बाढी पहिरो, विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरूका कारणले पनि नेपालमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू मर्ने गरेका छन् । त्यो बाहेक विभिन्न रोग दुर्घटना वा आपसमा झगडा वा विभिन्न प्रकारका अपराधजन्य कारवाहीहरूका कारणले पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको हुन्छ । एक प्रकारले त्यो हाम्रो दिनदिनैको स्वभाविक कुरा हुन्छ । प्रत्येक पिँढीका मानिसहरूको केही समयपछि निश्चितरूपले मृत्यु हुन्छ । ती हामीले दिनदिनै देख्ने वा भोग्ने गरेका कुराहरू हुन् । व्यक्तिगतरूपमा वा राष्ट्रिय रूपमा घट्ने त्यस प्रकारका घटनाहरूले त्यो बेला हामीलाई निकै दुःख पुराउँछन् । तर, समय बित्दै गएपछि हामीले त्यस प्रकारका घटना वा दुःखहरूलाई बिर्सदै जान्छौँ ।
समय बितेपछि मात्र होइन, तत्काल पनि हामीले समयभन्दा माथि उठेर त्यस प्रकारका तात्कालिक घटना वा दुःखहरूबारे विचार गर्न सक्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा तात्कालिकरूपमा पनि त्यस प्रकारका घटना वा आपतविपतबाट पैदा हुने दुःखबाट हामीहरू बच्न सक्छौँ । मानवीय स्वभावमा स्वभावतः कैयौँ कमजोरीहरू हुन्छन् । तैपनि तात्कालिक रूपमा पनि तिनीहरूबाट माथि उठेर विचार गर्न सक्यौँ भने त्यस प्रकारका आपतविपतहरूबाट पैदा हुने दुःखलाई हामीले धेरै नै कम गर्न सक्दछौँ । हाम्रा अगाडि अरू विकल्प पनि छैन । कुनै दुर्घटना घटिसकेपछि वा कसैको मृत्यु नै भइसकेपछि पनि त्यसबाट बच्नको लागि कुनै विकल्प हुँदैन । त्यसकारण कुनै पनि अप्रिय घटनाबाट पैदा हुने दुःखलाई हामीले बिर्सनै पर्दछ । तर समस्या के हो भने कुनै आपतविपत परेपछि वा कुनै घटना घटेपछि कुनै क्षति पुग्नुभन्दा पहिले नै, भविष्यमा कुनै क्षति पुग्ने आशङ्काले हामीहरू आतङ्कित वा दुःखित हुन थाल्दछौँ । त्यही कुरा अहिले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा पनि भइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसले चीनमा ठूलो क्षति पुरायो । अब त्यहाँ त्यसको असर केही कम भएको छ । तर त्यसको केन्द्र युरोप भएको छ । इटली, स्पेन र फ्रान्समा त्यसको गति तीव्र भएको छ । दिनदिनै सयौँको संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ । भारतमा पनि त्यसको सङ्क्रमण भइसकेको छ । दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशहरूमा पनि त्यसको सङ्क्रमण भइसकेको छ । तर नेपाल अहिलेसम्म त्यसको सङ्क्रमणबाट बचेको छ वा ‘बचेको छ भन्न सकिन्छ’, किनभने कतिपय मानिसहरूमा त्यसको सङ्क्रमण भएको भएपनि पत्ता नलागेको हुन सक्दछ ।
अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइनसकेको भएपनि विश्वव्यापी रूपमा भएको त्यसको सङ्क्रमण र मानिसहरूको मृत्युको कारणले नेपालमा एक प्रकारको आतङ्कको स्थिति उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा यो कुनै दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले त्यसको आशङ्काले भयभीत हुनु नै हो । जबकि कुनै घटना घटेर त्यसले क्षति पुराइसकेपछि पनि हामीले उच्च प्रकारको मानसिक वा आत्मबलद्वारा त्यो दुःखमाथि विजय प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ भने त्यो आपत आउनुभन्दा पहिले नै आतङ्कित हुनु वनको बाघले खानुभन्दा पहिले मनको बाघले खाएर जिउँदै मर्नु जस्तै हो । कुनै आपत आउनुभन्दा पहिले पनि त्यसलाई रोक्नका लागि पूरा तयारी गर्नुपर्दछ । तर हामीहरू पहिले नै आतङ्कित हुन थाल्यौँ भने कुनै विपदलाई रोक्नका लागि आवश्यक तयारी पनि राम्ररी हुन पाउँदैन ।
यो सत्य हो कि हाम्रा अगाडि कोरोना भाइरसको खतरा मुख बाएर उभिएको छ । त्यो स्थितिको सामना गर्नको लागि आज सारा देश, जनता सबै राजनीतिक पार्टी, संघसंस्था र सरकार समेत एक भएर उभिनु पर्ने आवश्यकता छ । संसारका विकसित र साधन र श्रोतसम्पन्न देशहरूमा पनि त्यसको सङ्क्रमणलाई रोक्न मुस्किल परेको छ भने नेपालमा त्यसको सङ्क्रमण भयो भने स्थिति कस्तो होला ? अस्पताल, औषधि–उपचार र आधुनिक साधनहरूको अत्यन्त कमि भएको हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयो भने त्यसले कति बिकाराल र भयानक रूप लेला ? अनुमान गर्न पनि सजिलो छैन । त्यसका साथै प्रशासनको अत्यन्त गैर जिम्मेवार कार्यप्रणाली र भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी समेतका कारणले त्यो कोरोना भाइरसले सङ्क्रमणलाई रोक्न धेरै नै मुस्किल पर्ने छ ।
कोरोना भाइरसको हल्ला सुरु भएपछि केही व्यापारीहरूले कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि आवश्यक पर्ने मास्क, सेनेटाइजर वा ग्याँस, पेट्रोलियम, खाद्यान्न आदि सामाग्रीहरू लुकाउन थालेका समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन् । देशमा सङ्कट पैदा हुन थालेको बेलामा त्यसबाट जनतालाई बचाउन सबैले बढीभन्दा बढी योगदान दिन प्रयत्न गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो कृत्रिम अभावको स्थिति पैदा गरेर सङ्कटलाई झन् गम्भीर बनाउन प्रयत्न गर्नु साँच्चिकै अत्यन्त अमानवीय र गम्भीर दुःखको कुरा हो । यो कुरा बुझन गाह्रो पर्दैन कि त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य पछि ती सामानहरू महँगो मूल्यमा बेचेर बढी सम्पत्ति कमाउनु हो । उनीहरूको त्यस प्रकारको सोचाइ, जस्तो कि माथि लेखियो, अमानवीयता त हो नै त्यसका साथै देशमा कोरोना भाइरसको महामारी बढ्यो भने त्यो खतरा स्वयम् उनीहरू वा उनीहरूका परिवारमाथि पनि बज्रन सक्ने छ ।
जेठ १३, २०७७ मंगलबार प्रा. मधुसूदन सुवेदी